अन्तरवार्ता Archives • Nepal's Trusted Digital Newspaperअन्तरवार्ता Archives • Nepal's Trusted Digital Newspaper
स्थानीय तह निर्वाचनमा बुटवल उपमहानगरपालिकाका लागि एमालेबाट बाबुराम भट्टराईले मेयरमा उम्मेदवार दिएका छन् । यहाँ एमालेले राष्ट्रिय जनमुक्तिलाई ११ वटा वडा सदस्य दिएर तालमेल गरेको छ । उनै मेयरका आकांक्षी भट्टराईसँग निर्वाचन केन्द्रित भएर गरेकाे कुराकानी : चुनावी अभियान कस्ताे भइरहेकाे छ ? हामीले मंगलबारदेखि औपचारिक रुपमा चुनावी अभियान सुरु गरेका छौँ । कार्यकर्ताहरूमा जुन […]
पूर्वउपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसकी नेतृ सुजाता कोइरालाले मुलुकमा विकास निर्माण लक्षित कामलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन् । आगामी चुनाव प्रचार अभियानमा लाग्दा विकास निर्माणसहितका नयाँ एजेन्डालाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्न उनले सुुझाव दिएकी हुन् । कांग्रेसले पुरानै नारालाई दोहो¥याएरभन्दा पनि स्थानीय तह र जनताको आवश्यकता हेरेर विकास निर्माणमा सहयोग गर्न सके मात्र […]
आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मा पाएपश्चात् मन्त्रालयका गतिविधिहरू निरन्तर रूपमा अघि बढेका छन् । नौवटा विधेयकहरू सदनमा पेस भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयमा भएका गतिविधि र आगामी योजनाबारे आन्तरिक मामिला तथा योजनामन्त्री माननीय हिमबहादुर शाहीसँग गरेको कुराकानीः मन्त्रालयको पदभार ग्रहण गरिसकेपछि के कस्ता समस्याहरु झेल्नुपर्‍यो ? आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयकोे […]
गण्डकी प्रदेशका युवा तथा खेलकुदमन्त्री दीपक मनाङेलाई आफ्नै कर्मचारीमाथि कुटपिट गरेको आरोप लाग्यो । मन्त्रालयका सूचना अधिकारीसमेत रहेका शाखा अधिकृत प्रकाश ओझाले आफुलाई मन्त्रिले कुटपिट गरेको बताएका थिए । मंगलबार फाइल बोकेर मन्त्रिको कार्यकक्षमा प्रवेश गरेपछि आफुमाथि हातपात गरेको उनको आरोप थियो । तर, मन्त्रि मनाङेले भने कुटपिट गरेको भन्ने आरोप गलत भएको बताए । […]
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारतको तीन दिने भ्रमणको सिलसिलामा शुक्रबार त्यसतर्फ प्रस्थान गर्दैछन् । पाँचौ पटक देशको प्रधानमन्त्री भएपछि उनले गर्न लागेको यो पहिलो भारत भ्रमण हो । स्थानीय निर्वाचनको मुखमा देउवाले गर्ने भारत भ्रमणको समयमा दुई देशबीच केही समझदारी तथा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी भइरहेको छ । यसै सन्दर्भमा भारतका लागि नेपाली पूर्वराजदूत प्रा.लोकराज बरालसँग […]
किभ–युक्रेनमाथि भएको हमलामा ४९८ रुसी सेना मारिएका छन् । युक्रेन हमलामा आफ्ना ४९८ सुरक्षाकर्मी मारिएको रुसी रक्षा मन्त्रालयले जनाएको हो । रुसले पहिलो पटक आफ्नो तर्फ भएको क्षतिको विवरण सार्वजनिक गरेको हो । तर, युक्रेनले रुसले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक भन्दा बढी रुसी सेना मारिएको दाबी गरेको छ । रुसी हमलामा ठूलो संख्यामा सर्वसाधारणको हताहति भएको […]
म्याग्दे गाउँपालिका अध्यक्ष मायादेवी राना तनहुँका १० स्थानीय तहमध्ये एक्ली महिला प्रमुख हुन् । संघीयता कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरु भएसँगै गाउँपालिकाले उनको नेतृत्वमा विकास र सम्बृद्धिको खाका कोर्दै छ । साविकको छाङ, जामुने र मनपाङ गाविस मिलेर बनेको म्याग्दे गाउँपालिकामा करिब पाँच बर्षको अवधिमा मायादेवी नेतृत्वको स्थानीय सरकारले के गर्यो भनेर उनैबाट जवाफ खोज्ने प्रयास गरेका […]
पचास करोड डलरको अमेरिकी विकास सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)का कारण अहिले पाँचदलीय सत्ता गठबन्धन संकटमा परेको छ । एमसीसीलाई संसदमा पेस र अनुमोदन गर्ने विषयमा सत्तारुढ दलमध्ये नेपाली कांग्रेस एकातिर र अन्य चार दल नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चा अर्कोतिर छन् । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेस एमसीसी हालकै अवस्थामा […]
७० दिनमा बसबाट लण्डन, तपाईँ पनि जाने ?
भारतीय ट्राभल कम्पनी एड्भेन्चर ओभरल्यान्डले २० हजार किलोमिटर लामो बस यात्रा सञ्चालन गर्दैछ। कम्पनीले भारतको दिल्लीदेखि बेलायतको लन्डनसम्‍म चल्ने बस सञ्चालन गर्ने भएको हो। विभिन्न रिपोर्टहरू अनुसार दिल्लीदेखि लन्डनसम्मको बस यात्रा ७० दिनको हुनेछ। यो बस म्यानमार, थाइल्यान्ड, लाओस, चीन, किर्गिजस्तान, उजबेकिस्तान, काजाकिस्तान, रुस, लाटभिया, लिथुआनिया, पोल्यान्ड, चेक रिपब्लिक, जर्मनी, नेदरल्याण्ड, बेल्जियम र फ्रान्स हुँदै […]